यस पाठमा हामी अंग्रेजीमा व्याख्यान दिनहरू देख्नेछौं। हाम्रो विषय अंग्रेजी दिन र टर्की शीर्षकमा, अंग्रेजी दिनहरू र अंग्रेजी दिनहरूको बारेमा नमूना वाक्यहरू बारे अभ्यासहरू पनि हुनेछन्। हामी अंग्रेजीमा दिनको हिज्जे र उच्चारण पनि समावेश गर्दछौं।
हाम्रो अ days्ग्रेजी दिन कोर्सको सामग्री निम्न शीर्षकहरू समावेश गर्दछ, तपाईं निम्न शीर्षकहरू देख्नुहुनेछ जब तपाईं पृष्ठको तल तल स्क्रोल गर्दै हुनुहुन्छ।
अंग्रेजीमा दिनको हिज्जे र उच्चारण
अंग्रेजी दिनहरू र उनीहरूको टर्की बराबरहरू
अंग्रेजीमा दिनहरूको बारेमा नमूना वाक्य
आज अंग्रेजी कुन हो? आज कुन दिन हो? आफ्नो प्रश्नहरु नसोध्नुहोस्
आज अंग्रेजीमा कुन दिन हो भनेर नभन्न
अंग्रेजी दिनहरूको बारेमा मिनी परीक्षण
अंग्रेजी दिनहरूको बारेमा व्यायाम
अंग्रेजीमा दिनको गीत
अब हामी तपाईंलाई पहिले अंग्रेजी दिनहरूको एक राम्रो दृश्य दिन्छौं।
अंग्रेजी दिनहरूमा महत्त्वपूर्ण नोटहरू;
अ days्ग्रेजी दिन र महिना आवश्यक रूपमा क्यापिटल अक्षरबाट सुरू हुन्छ।
दिन र महीनाको बारेमा कुरा गर्दा तपाईंले पूरै शब्द प्रयोग गर्नुपर्दैन। तपाईं यसको सट्टा संक्षिप्त शब्दहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी लामो पदहरूमा।
शब्द महीना, जुन हामी अंग्रेजीमा मिति भनेर उल्लेख गर्छौं, यसलाई महीनाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। महिनाको शब्दले प्रत्यय लिन्छ - महिनाको रूपमा। दिनको अंग्रेजीमा मतलब के हुन्छ प्रश्न पनि आश्चर्यजनक छ। शब्द शब्दलाई "दिन" को रूपमा परिभाषित गरिएको छ, र दिन उपनामहरू हुन् - "दिन" को रूपमा। अर्को अध्यायमा, हामी अंग्रेजीमा हप्ताका दिनहरूको कोटीहरू देख्दछौं।
* अ pl्ग्रेजी बहुवचन शब्दहरू शब्दको आधारमा प्रत्ययको रूपमा -es, -es थप गर्दछ।
अंग्रेजीमा हप्ताको दिन के हो?
त्यहाँ पात्रो हप्तामा सात दिनहरू छन्। जे होस् प्रत्येक दिनको आफ्नै लेखन र ध्वनि हुन्छ, ती सबैमा केही समानता छ। यो "दिन" शब्दको साथ समाप्त हुन्छ, जसको अर्थ दिन हो। दिन को नाम याद गर्न को लागी जब यो जानकारी तपाइँको काम को लागी सजिलो बनाउन सक्छ।
तलको सूचीमा तपाईले दिनहरूको अंग्रेजी फेला पार्नुहुनेछ, कोष्ठकमा तिनीहरूको संक्षिप्त नाम र उनीहरूको टर्की समकक्ष। तपाईं त्यसपछि यी प्रत्येक शब्दहरूको संक्षिप्त स्पष्टीकरण, तिनीहरूको उत्पत्ति र कसरी तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै विधिहरू छन् जुन तपाईं दिन याद राख्न लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
यी मध्ये एक तरिका प्रत्येक शब्द पाँच पटक लेखेर काम गर्ने तरीका हो। अर्को प्रभावकारी विधि भनेको कार्डको एक तर्फ सानो कागजातहरू अंग्रेजी र अर्को तिर टर्कीमा तयार पार्नु हो, र अनियमित रूपमा रेखाचित्र र पढ्ने विधिको साथ काम गर्ने। एकै साथ तपाई आफ्नो कोठाको केही अंशमा अ words्ग्रेजी शब्दहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र साना कागजातहरू तयार र पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको आँखाको अगाडि हुनेछ।
सोमबार (सोम): सोमबार
मंगलबार (मंगलबार): मंगलबार
बुधवार (बुधवार): बुधबार
बिहीबार (थु): बिहीबार
शुक्रवार (शुक्र): शुक्रबार
शनिबार (शनिबार): शनिबार
आइतवार (रवि): आइतवार
सोमबार कुन दिन?
सोमबार हप्ताको पहिलो दिन हो। सोमबारको रूपमा, पहिलो अक्षर राजधानीमा लेखिएको छ। यदि यो एक वाक्यमा प्रयोग भएको छ भने पनि, पहिलो अक्षर सधै ठूलो हुन्छ। यसको संक्षिप्त रूप सोम को रूपमा संकेत गरीएको छ। सोमबार शब्द कसरी उच्चारण गर्ने प्रश्नको उत्तर यो हो कि यो "मन्डे" को रूपमा पढिएको छ।
अ in्ग्रेजीमा हप्ताको प्रत्येक दिनको उत्पत्ति बारेमा बिभिन्न मतहरू छन्। विशेष गरी सोमबार, शनिबार र आइतवार, तिनीहरूका नाम आकाशीय निकायहरूबाट आएको मानिन्छ। चन्द्रमा जुन शनि, चन्द्रमा र सूर्य शब्दहरूबाट उत्पन्न भएको हो सो तुर्कीमा सोमबार शब्दको उत्पत्ति हो।
नमूना वाक्यहरू सोमबार - सोमबारको बारेमा
तपाईंले सोमबारसम्म आफ्नो असाइनमेन्टहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
तपाइँ सोमबार तपाइँको गृहकार्यमा हात दिनुहुनेछ।
गृहकार्य अर्को सोमबार हुने छ।
होमवर्क अर्को सोमबार वितरित हुनेछ।
मंगलबार कुन दिन?
मंगलबार हप्ताको दोस्रो दिन हो। म Tuesday्गलबारको रूपमा पहिलो अक्षर राजधानीमा लेखिएको छ। यदि यो एक वाक्यमा प्रयोग भएको छ भने, पहिलो अक्षर सँधै ठूलो हुन्छ। यसको संक्षिप्त रूप मंगको रूपमा संकेत गरिएको छ। मंगलवार कसरी शब्द उच्चारण गर्ने प्रश्नको उत्तर यो "tyuzdey" को रूपमा पढ्नु हो।
मंगलबार शव्दको उत्पत्ति टायर, एक पौराणिक नोर्स ईश्वरबाट आएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ।
मंगलवार - म Tuesday्गलबारको बारेमा नमूना वाक्य
आज कुन दिन हो? - आज बिहीबार हो।
आज कुन दिन हो? - आज मंगलबार हो।
हप्ताका दिनहरू: सोमबार, म Tuesday्गलबार, बुधवार, बिहिबार र शुक्रवार हो।
हप्ताहरू: सोमबार, म Tuesday्गलबार, बुधवार, बिहिबार र शुक्रवार।
टर्की ग्रान्ड नेश्नल एसेम्ब्ली मंगलबार भेला हुनेछ।
टर्कीको ग्रान्ड नेश्नल एसेम्ब्ली म meet्गलबार भेला हुनेछ।
बुधवार कुन दिन?
बुधवार, बुधवार हप्ताको तेस्रो दिन हो। बुधवार को रूपमा, पहिलो पत्र राजधानीमा लेखिएको छ। यदि यो एक वाक्यमा प्रयोग भएको छ भने, पहिलो अक्षर सँधै ठूलो हुन्छ। यसको संक्षिप्त रुप बुधको रूपमा संकेत गरिएको छ। बुधवार कसरी शब्द उच्चारण गर्ने प्रश्नको उत्तर यो "भेन्सडी" को रूपमा पढ्नु हो।
बुधबार Wöden दिन को रूप मा शुरू भयो। वाडेन, वा ओडिन, नोर्स देवताहरूको राज्यको शासक भनेर चिनिन्छ। पौराणिक कथाबाट लिइएको यो शब्द समयसँगै बुधवार बन्न परिवर्तन भयो।
बुधवार - बुधबार बारेमा नमूना वाक्य
उनीहरूको बुधवार दिउँसो कुनै कक्षा छैन।
बुधवार दिउँसो कुनै कक्षा छैन।
बुधवारको परीक्षा गाह्रो हुनेछ।
हामीले बुधवार सम्म एउटा निबन्ध बुझाउनु पर्छ।
हामीले बुधवार सम्म एउटा लेख पेश गर्नुपर्नेछ।
बिहीबार कुन दिन?
बिहीबार, बिहिबार हप्ताको चौथो दिन हो। बिहीबारको रूपमा पहिलो पत्र राजधानीमा लेखिएको छ। यदि यो एक वाक्यमा प्रयोग भएको छ भने, पहिलो अक्षर सँधै ठूलो हुन्छ। यसको संक्षिप्त रूप Thu को रूपमा दर्शाईन्छ। बिहीबार कसरी शब्द उच्चारण गर्ने प्रश्नको उत्तर यो "törzdey" को रूपमा पढ्नु हो।
बिहीबार शब्दको उत्पत्ति थोर, शक्ति र सुरक्षाका देवता हो, जसको नोर्स पौराणिक कथा छ। थोरको दिन भनेर चिनिने दिन समयको साथ बिहीबारको रूपमा पनि गाउन शुरू भयो।
बिहीबार - बिहीबार को बारे मा नमूना वाक्य
मेरी आमा गत बिहिबार देखि बिरामी थिए।
आज बिहीबार हो।
शुक्रवार कुन दिन?
शुक्रवार हप्ताको पाँचौं दिन हो। शुक्रवार को रूपमा, पहिलो पत्र राजधानीमा लेखिएको छ। यदि यो एक वाक्यमा प्रयोग भएको छ भने पनि, पहिलो अक्षर सधै ठूलो हुन्छ। यसको संक्षिप्त रूप शुक्र को रूपमा संकेत गरीन्छ। शुक्रवार कसरी शब्द उच्चारण गर्ने प्रश्नको उत्तर यो "फिरेडी" को रूपमा पढ्नु हो।
शुक्रवार देवी फ्रिग, वा फ्रेया, जो नोर्स पौराणिक कथामा ओडिनकी पत्नी थिइन्। शब्द, फ्रेया दिवस को रूप मा, समय संग शुक्रवारमा परिवर्तन भएको छ।
शुक्रवार - शुक्रवार बारे नमूना वाक्य
म अर्को शुक्रवार डाक्टरलाई फेरि भेट्ने छु।
म अर्को शुक्रवार डाक्टरसँग भेट गर्नेछु।
मेरो जन्मदिन यस साल शुक्रवार आउँछ।
यस वर्ष मेरो जन्मदिन शुक्रबार हो।
शनिबार कुन दिन?
शनिबार, शनिवार हप्ताको छैठौं दिन हो। यो सप्ताहन्त हो। शनिबारको रूपमा पहिलो अक्षर राजधानी अक्षरमा लेखिएको हुन्छ। यदि यो एक वाक्यमा प्रयोग भएको छ भने पनि, पहिलो अक्षर सधै ठूलो हुन्छ। यसको संक्षिप्त विवरण बेच्ने संकेत गरीएको छ। शनिवार कसरी शब्द उच्चारण गर्ने प्रश्नको उत्तर यो "अनलाइन" को रूपमा पढ्नु हो।
शनिबार ग्रहको शव्दको उत्पत्तिबाट यसको नाम निकालेको छ। यो शनिबारको दिनको रूपमा उत्पत्ति भएको मानिन्छ। यो समयसँगै परिवर्तन भयो र शनिबार भयो।
शनिवार - शनिबारको बारेमा नमूना वाक्यहरू
अर्को शनिबार कसरी?
आज शनिबार हो र भोलि आइतवार हो।
आइतवार कुन दिन?
आइतवार हप्ताको सातौं, अन्तिम दिन हो। यो सप्ताहन्त हो। आइतवारको रूपमा पहिलो पत्र राजधानीमा लेखिएको हुन्छ। यदि यो एक वाक्यमा प्रयोग भएको छ भने पनि, पहिलो अक्षर सधै ठूलो हुन्छ। यसको संक्षिप्त रूप सूर्यको रूपमा भनिएको छ। आइतवार कसरी शब्द उच्चारण गर्ने प्रश्नको उत्तर यो हो कि यसलाई "सान्डे" को रूपमा पढिएको छ।
आइतवारको नाम सूर्य शब्दको उत्पत्तिबाट आएको हो। सूर्यको दिन भनेको सूर्यको दिन हो। समयको साथ, यो सरलीकृत भयो र आइतवार भयो।
आइतवार - आइतवारको बारेमा नमूना वाक्य
हामी अर्को आइतवार पिकनिकमा जान्छौं।
हामी अर्को आइतवार पिकनिक जाँदैछौं।
हामी अर्को आइतवार विवाह गर्ने छौं।
हामी अर्को आइतवार विवाह गर्नेछौं।
अंग्रेजी अभ्यास प्रश्नहरूमा दिनहरू
१. यदि हिजो बुधवार हो, आज कुन दिन हो?
a) आइतवार b) मंगलबार c) सोमबार d) बिहीबार
२. यदि हिजो आइतवार थियो भने भोली कुन दिन हो?
a) सोमबार b) मंगलबार c) बिहीबार d) शनिबार
Today. यदि आज शुक्रवार हो भने, हिजो कुन दिन थियो?
a) बिहीबार b) बुधवार c) मंगलवार d) शनिबार
Tomorrow. यदि भोली बुधवार हो, आज कुन दिन थियो?
a) आइतवार b) बिहीबार ग) सोमबार d) मंगलबार
….… .. आइतवार पछिको दिन हो र प्राय: कार्य हप्ताको सुरूवातलाई दर्साउँछ।
a) मंगलवार b) शनिवार c) सोमबार d) शनिवार
केहि अन्य नमूना प्रश्नहरू:
हप्ताको तेस्रो दिन कुन हो?
सप्ताहन्तका दिनहरू के हुन्?
सनिबार र आइतबार।
हप्ताका दिनहरू के हुन्?
सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार।
स्कूल जाने पहिलो दिन कुन हो?
स्कूलको पहिलो दिन कुन हो?
बिदा कुन दिन हो?
छुट्टी के हो?
एक वर्षमा कति दिन छन्?
अंग्रेजीमा दिनहरूको लागि नमूना वाक्य
आज हप्ताको पहिलो दिन हो: आज हप्ताको पहिलो दिन हो।
सोमबार हप्ताको पहिलो दिन हो। : सोमबार हप्ताको पहिलो दिन हो।
मंगलबार हप्ताको दोस्रो दिन हो। : मंगलबार हप्ताको दोस्रो दिन हो।
मेरी आमा शुक्रवार आउनुहुनेछ। : मेरी आमा शुक्रवार आउनुहुनेछ।
म अर्को सोमबार स्कूलमा आउनेछु किनकि म अझै बिरामी छु: म अर्को सोमबार स्कूलमा जान्छु किनकि म अझै बिरामी छु।
म शुक्रबार नयाँ बैग किन्नेछु: शुक्रवार, म नयाँ झोला किन्ने छु।
त्यहाँ हप्तामा सात दिन: हप्तामा सात दिनहरू हुन्छन्।
त्यहाँ एक बर्षमा weeks२ हप्ता हुन्छन्: त्यहाँ एक बर्षमा weeks२ हप्ता हुन्छन्।
आइतवार सूर्यको नाममा राखिएको छ: आइतवार सूर्यको नाम पछि हो।
हप्ताको कुन दिन तपाईंको मनपर्ने छ? : हप्ताको कुन दिन तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्दछ?
- तिनीहरू सोमबार त्यहाँ हुने संभावना छैन।
यो सम्भावना छैन कि तिनीहरू सोमबार त्यहाँ हुनेछन्।
- त्यसो भए पछिल्लो सोमबार सिनेमामा के भयो मलाई बताउनुहोस्।
गत सोमबार चलचित्र थिएटरमा के भयो मलाई थप विस्तारित रूपमा मलाई भन्नुहोस्।
- तपाइँ मसँग सोमबार मितिमा जान चाहानुहुन्छ?
के तपाईं सोमबार मसँग मितिमा जान चाहनुहुन्छ?
- के तपाईंलाई कुनै छुट्टी थाहा छ, जुन सोमबार मनायो?
के तपाइँ सोमबार मनाउने कुनै छुट्टी / छुट्टिहरू बारे थाहा छ?
- स्कूल गत सोमबार बन्द भएको थियो, किनकि यो छुट्टी थियो।
गत सोमबार स्कूल बन्द थियो किनकि यो छुट्टी / बिदा थियो।
अब जब तपाई हप्ताका दिनहरू जान्नुहुन्छ, तपाईले प्रासंगिक शब्दावलीलाई एक वाक्यमा राख्न सक्षम हुनुपर्नेछ। तपाईं सजिलैसँग वाक्यको संरचना अनुसार यी अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईंलाई आधारभूत वाक्यांशहरू थाहा भएपछि अ in्ग्रेजीमा वाक्य बनाउनु त्यति सजिलो हुन्छ। यी ढाँचाहरूलाई याद गर्न, फेरि, अंग्रेजी सिकाउने विधिहरू तपाई यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको दैनिक जीवनमा प्राय: यसलाई प्रयोग गरेर यसलाई सुदृढ पार्न सक्नुहुन्छ
यहाँ केहि शब्द र अभिव्यक्तिहरू छन् जुन तपाई हप्ताको दिन संग अंग्रेजीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ;
भोली - भोली
हिजो - हिजो
बिहान - बिहान
दिउँसो - दिउँसो (१२: ०-12-१-00: ००)
साँझ - साँझ (१:17:०० र २१:०० बीच)
छुट्टी - सप्ताहन्त (सप्ताहन्तको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ।)
हप्तामा सात दिन हुन्छन्।
आज सनिबार हो।
अंग्रेजी दिनहरूमा शीर्षकका लागि सुझावहरू
विशेष गरी गीतहरू र छोटो कथाहरू अंग्रेजीमा दिनको शीर्षक बुझाउँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस प्रकारका गीतहरू, जुन प्राइमरी स्कुलका विद्यार्थीहरूको लागि धेरै उपयुक्त हुन्छन्, अधिक स्थायी हुन्छन् जब उनीहरू ध्यान दिएर र धेरै पटक सुन्दछन्। बच्चाहरू जो गीतहरू साथ गर्न प्रयास गर्छन् पढ्न र दिनको समकक्षको बारेमा अधिक सजीलो जान्न सक्छन्।
प्रत्येक क्षेत्रमा जस्तो, यो अंग्रेजी सिक्ने अभ्यास गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। केही दिनको लागि अ days्ग्रेजी दिन अभ्यास गरेर, तिनीहरूलाई वाक्यहरूमा प्रयोग गरेर, अ English्ग्रेजी दिनहरूको बारेमा गीतहरू सुन्नुहोस्, वा केही पुस्तकहरू पढ्नुभयो भने, तपाईं यस सन्दर्भमा पर्याप्त अभ्यास पाउनुहुनेछ। विशेष गरी तपाईको दैनिक जीवनमा तपाईले आफ्नो दिनहरूमा अ English्ग्रेजी दिनहरूको शीर्षक प्रयोग गरेर राम्ररी सुदृढ पार्नुहुनेछ।
अंग्रेजीमा हप्ताको दिनहरूको बारेमा नमूना गीतहरू:
मलाई भन, हप्ताको दिन के हो?
तपाईंले आफ्नो सोमबार, मंगलबार, बुधवार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, आइतवार पनि पाउनुभयो
अब, माउ मुर्ति पछि दोहोर्याउँनुहोस्, हामी यहाँ जान्छौं
अंग्रेजीमा कुन दिन कुन दिन हो भनेर सोध्ने वाक्य;
यो कुन दिन हो?
यो आइतवार हो
हामी भन्न सक्छौं।
महत्त्वपूर्ण जानकारी *
म सँधै आइतवारको हिड्न जान्छु। (म सँधै आइतवारको हिड्न जान्छु।)
यो वाक्य मा देख्न सकिन्छ रूपमा, शब्द संडे ले -s प्रत्यय लिया। दिनहरू कुनै पनि प्रत्यय बिना नै वाक्यहरूमा प्रयोग हुन्छ। तर मात्र यदि तपाई दिनको लागि केहि विशेष कुरा भन्नु हुन्छ भने तपाईले गहनाको जोडी ल्याउनु पर्छ। उदाहरण को लागी, माथिको वाक्य मा, आइतवार शब्द प्रत्यय -s लिन्छ किनभने ऊ केवल आइतवार हिड्छ।
जब दिनहरू संकेत गर्दै, दस वा in को सुरूवात सुरूमा प्रयोग गरिन्छ। यो कहिलेकाँहि दुविधा पनि हुन्छ जुन कुन हप्ताको दिनहरू निर्दिष्ट गर्दा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गर्दछ। समयको प्रस्तावनाहरू प्रयोग गर्दा तपाई वाक्यमा हप्ताको दिन र वाक्यको अर्थ प्रयोग गर्ने कुरामा भर पर्दछ। सामान्यतया हप्ताको अवधारणाको बारेमा कुरा गर्ने क्रममा "in" प्रयोग गरिन्छ, र "on" जब हप्ताको निश्चित दिन उल्लेख गरिएको हुन्छ।
सोमबार, आइतवार, मंगलबारमा।
हप्ताका दिनहरू कसरी वर्गीकृत गरिएका छन्?
हप्ताको सात दिनलाई दुई वर्गमा बाँडिएको छ। अ In्ग्रेजीमा, त्यहाँ दुई दिनहरू हप्ताका दिन र सप्ताहन्तका रूपमा तोकिएका छन्। अंग्रेजीमा हप्ता दिनको मतलबहप्ता दिन"अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएको छ।
हप्ता दिन- हप्ता दिनहरू
सप्ताहन्त - सप्ताहन्त
मेरी आमाले सप्ताहन्तमा रोटी र कुकीहरू पकाउँछिन्।
मेरी आमाले सप्ताहन्तमा रोटी र कुकीहरू पकाउँनुहुन्छ।
साटो सप्ताहन्तमा तीरंदाजी अभ्यास गर्दछ।
श्री साटो सप्ताहन्तमा धनुर्विद्या काम गर्छन्।
तपाईं सप्ताहन्तमा कस्तो किसिमको काम गर्नुहुन्छ?
तपाई सप्ताहन्तमा के प्रकारको कार्य गर्नुहुन्छ?
अंग्रेजी दिनहरूमा व्याख्यानको लागि नमूना पाठ
अंग्रेजी दिनको व्याख्यान एउटा जटिल विषय हुन सक्छ, विशेष गरी प्राथमिक विद्यालयको विद्यार्थीहरूको लागि। यसको व्याख्या गर्न यस पाठलाई विश्लेषण गर्न निश्चित ढाँचामा पाठ प्रयोग गर्नाले अझ स्थायी शिक्षण विधि बन्छ। यसको लागि शिक्षकले कक्षामा पाठ पढ्छ र पाठमा प्रत्येक शब्द एक एक गरी सिकाउँछ।
हप्तामा days दिनहरू छन्। यी दिनहरू: सोमबार, म Tuesday्गलबार, बुधवार, बिहिबार, शुक्रवार, शनिबार र आइतवार हुन्। हप्ताहरू: सोमबार, म Tuesday्गलबार, बुधवार, बिहिबार, शुक्रवार। सप्ताहन्त दिन: शनिबार र आइतवार। एक बर्षमा7365 दिन हुन्छन्। एक महिनामा २ 28, or० वा days१ दिनहरू छन्।
हप्तामा days दिनहरू छन्। यी दिनहरूः सोमबार, म Tuesday्गलबार, बुधवार, बिहिबार, शुक्रवार, शनिबार र आइतवार हुन्। हप्ताहरू: सोमबार, म Tuesday्गलबार, बुधवार, बिहिबार, शुक्रवार। सप्ताहन्त दिन: शनिबार र आइतवार। एक बर्षमा7365 दिन हुन्छन्। एक महिनामा २ 28, or० वा days१ दिनहरू छन्।
हप्ताको दिनहरू विस्तृत रूपमा जान्नुले हामीलाई धेरै तरिकाले फाइदा पुर्‍याउँछ। हामी निश्चित रूपमा दैनिक जीवनको सबै पक्षहरू जस्तै क्यालेन्डर, अपोइन्टमेन्ट, व्यापार बैठकमा प्रयोग गर्दछौं। वाक्यहरूमा दिनहरू प्रयोग गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एक परीक्षामा तपाईं लिनुहुनेछ वा अन्य धेरै अवस्थाहरूमा, तपाईंले दिनहरूको मुद्दा सामना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अ in्ग्रेजीमा हप्ताका दिनहरू तपाईंले यस विषयलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नु पर्छ।
अ English्ग्रेजी एक भाषा हो जुन लेखिए जस्तै पढ्न सकिदैन, यसकारण जब तपाईंले सिक्न थाल्नुहुन्छ भने शब्दहरूको उच्चारण सुन्नुहुन्न। शब्दकोशको आवाज सुने पछि तुरुन्तै ठूलो स्वरले शब्द दोहोर्याएर तपाईंले केही चोटी प्रयास गर्नु पर्छ। तपाईंले भर्खर सिक्नुभएका शब्दहरू दोहोर्याउँदा आवाजहरू पूर्ण रूपमा र स्पष्ट रूपमा बाहिर आउँदैन यसले एक स्थायी शिक्षा प्रदान गर्दछ। शब्दको हिज्जे मात्र सिक्नु अ in्ग्रेजीमा पर्याप्त छैन। तपाईंले यसको उच्चारण पनि सिक्नुपर्दछ र यसलाई संचारमा बारम्बार प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाइँ तपाइँको स्मृतिमा नयाँ शब्दहरू चाँडै बचत गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी अंग्रेजी गीतहरू सुनेर।
यो पनि ध्यान दिनुहोस् कि जब अंग्रेजी समय इकाईहरू, दिनहरू, महिनाहरू, र कहिलेकाँही मौसमहरू सँगै प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया, तिनीहरूको प्रयोगको लागि निश्चित आदेश नियम लागू हुन्छ। यो पहिलो दिनमा र अर्को महिना वाक्यमा लेखिएको छ। महिना र दिन बान्कीहरू जुन समयको प्रोजेस्सेन्सको माध्यमबाट एक अर्कासँग जडित छन् पुन: अंग्रेजी सिक्ने विषय हो जुन दैनिक जीवनमा प्रायः देखा पर्दछ।
सिकेका शब्दावलीमा पुनः एक्सपोजरले तपाईंलाई नयाँ उदाहरणहरू दिन्छ र त्यसैले तपाईको दिमागमा यी शब्दहरूलाई बल दिन्छ। अर्कोतर्फ, नयाँ शब्दहरू र अभिव्यक्तिहरू सिक्नु तपाईंको शब्दावली निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी अंग्रेजी जस्तो धेरै शब्दहरूको भाषामा। अ days्ग्रेजी दिनहरूको शीर्षक एक विषय हो जुन तपाईं सजिलैसँग अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ र निरन्तर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले अचानक सबै कुरा र प्रत्येक विषयको जादुई तरिकाले सिक्ने आशामा अ learning्ग्रेजी सिक्न थाल्नुभयो भने, तपाईं सायद अलमल्लमा पर्नुहुनेछ र धेरै समयको लागि यस शिक्षा जागिरबाट शान्त हुनुहुनेछ।
के तपाइँ साथीहरु वा परिचित हुनुहुन्छ जसले अ in्ग्रेजीमा अनलाइन पोष्ट गर्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई आफ्नो समाचार फिडमा नहेर्नुहोस्। उनीहरूले साझेदारी गर्ने वस्तुहरू स्क्यान गर्नुहोस् र प्रत्येक दिन एक वा दुई व्यक्ति पत्ता लगाउन नबिर्सनुहोस्। ती समाचार वा पत्रिका लेखहरू, भिडियोहरू, भाषणहरू, ब्लग पोष्टहरू, गीतहरू, वा अरू केहि हुन सक्छन्: यदि यो अंग्रेजीमा हो र बिषय तपाईंको रुचि हो भने, यसले मद्दत गर्दछ। आश्चर्यचकित र अनुसन्धान हुँदै चरणबद्ध कदम अगाडि नबिर्सनुहोस्।
अंग्रेजी दिन व्याख्यानमा अन्त नोटहरू
कुनै नयाँ विषयवस्तुको रूपमा नयाँ भाषा सिक्नुपर्दा नयाँ शब्दहरू तपाईंको स्मृतिमा रहिरहन मद्दत गर्ने पुनरावृत्ति र सही उच्चारण प्रमुख हुन्छ। यस कारणका लागि, तल तपाईले साझेदारी गर्नुभयो अंग्रेजी दिनहरूको बारेमा प्रश्नहरूको अभ्यास गर्नुहोस् ve अंग्रेजी दिन नमूना वाक्य तपाईं सेक्सन पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले वाक्यहरुलाई उत्तर दिन सक्नुहुन्छ कागज को एक टुक्रा मा लेखेर।
जब तपाई अ English्ग्रेजी सिक्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईले अध्ययन गर्नु पर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मध्ये एक अंग्रेजी दिन हो। यो सेक्सन राम्रोसँग सिक्नु भनेको सर्तहरू सिक्नु हो जुन तपाई आफ्नो दैनिक जीवनमा प्राय: प्रयोग गर्नुहुन्छ। यस लेखमा दिन अंग्रेजीमा कसरी लेख्ने, अंग्रेजीमा दिनहरू कसरी लिने हामीले त्यस्ता शीर्षकहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं।
अ language्ग्रेजीमा हप्ताको दिनहरू सिक्नु प्रत्येक भाषा सिक्नेहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हप्ताका दिनहरू कसरी बोल्ने भन्ने कुरा जान्दै, अपोइन्टमेन्ट बुकि fromदेखि होटेल बुकिंग सम्म दैनिक कुराकानीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। भाग्यवस, अंग्रेजीमा हप्ताको दिनहरू सिक्न सजिलो छ र हामी तपाईंलाई ती सम्झन कसरी मद्दत गर्ने भन्ने बारे सुझावहरू छन्।
तपाईं अक्सर दिन र महिनाहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ जब भेटघाट गर्दा वा बैठक आयोजना गर्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईं व्यवसाय अंग्रेजीमा विशेषज्ञता चाहानुहुन्छ भने। त्यसकारण तपाईले यो विषय राम्ररी सिक्नुपर्दछ र धाराप्रवाह बोल्ने कोशिस गर्नु पर्छ। तपाईं आफ्नो दैनिक जीवनमा अ English्ग्रेजी समावेश गर्ने विधि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जुन अंग्रेजी शिक्षाको सबैभन्दा आधारभूत विधिहरू मध्ये एक हो।